Kanjani ukwenza emehlweni okuncane CIL
abadlali abaningi abakwazi ngokuvamile ukudlala ezindaweni ezihlukahlukene ethandwa ithimba Bhalobhasha COP ngenxa yokuthi bengakuthandi emehlweni. Ukuze ezinye kubonakala sikhulu kakhulu, umuntu - obukhulu kakhulu, yingakho akunakwenzeka ahlolisise kahle komakhelwane. Yingakho abantu abaningi bangathanda ukwenza emehlweni kancane, kodwa bambalwa kakhulu abantu bazi kahle indlela lokhu okwenziwa ngayo. Iqiniso liwukuthi eminyakeni yamuva lithole udumo omkhulukazi akuloba engxenyeni yokugcina yencwadi uchungechunge ngokuthi CS GO, futhi eyandulela (KCC) iye cishe ukhohlwe. Kodwa zisekhona abalandeli abaqotho abangabhalisile ukuthuthela inguqulo entsha futhi ujabulele ukudlala eyodwa ubudala. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba ukuyichaza ngokuningiliziwe indlela ungathola emehlweni okuncane CMP, hhayi nje ku GO COP.
Le nguqulo ubudala
Okokuqala okudingeka usicabangele ukuthi ungathola kanjani umbono omncane CMP version yokuqala, ngoba kamuva it wadedelwa isibuyekezo Ushintshe eziningi imiyalo console. Ngakho, uma uqhubeka ukudlala inguqulo endala, uzodinga ukungena cl_crosshairscale umyalo, okuyinto unomthwalo ngokunembile usayizi emehlweni akho. Ngokufaka amagugu ezahlukene emva lo myalo, ungakwazi ukushintsha ubukhulu. Ngokwemvelo, lokhu kusho ezincane ukubaluleka, ezincane i-scope ne okuphambene nalokho. Small kulokhu ubhekwa value yokuthi ingeqi ayizinkulungwane ezimbili. Yilokho, manje wazi ukuthi ungathola emehlweni okuncane CIL - akusiwona njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale ekuqaleni. Kodwa inkinga ukuthi le ndlela ezikhathini eziningi engasebenzi, ngoba kakade yisikhathi. Uma ethuthukisiwe umdlalo wakho, khona-ke udinga uzame enye indlela.
Kuyinto imfihlo ukuthi indlela lofuna kule mdlalo uhlanganisa Amabha amane, okuyinto musa abaphila nomunye bese bakha engu- mpo ngaphandle phakathi. Ngakho, imisebenzi emibili ebalulekile obhekana nazo. Ukuze uthole umbono omncane KCC, uzodinga ukunqinda izici, kanye ukuze uzenze mncane. Kodwa izinto zokuqala kuqala. Okokuqala, kufanele usebenzise cl_crosshairsize umyalo, ngemva kwalokho-ke kuyadingeka ukwethula esiphansi ukubaluleka ngokunokwenzeka, okuwukuthi 1. Lokhu kuzokwenza emehlweni dash njengoba short ngangokunokwenzeka - kungcono kahle ukuthi bafuna. Nokho, kufanele uqaphele ukuthi awukabi ukuthi benzenjani umbono omncane KCC. Phambi kwakho namanje elinde ushintsho ukujiya.
Wena kwabathatha odwi eside emehlweni akho, kodwa ukujiya yabo namanje okufanayo. Ukuze ushintshe lokhu, uzodinga ukubhalisa elinye iqembu - cl_crosshairthickness. Njengasendabeni yabase langaphambilini, uzodinga ucacise value ukuthi kuzodingeka ukuba uhlele. Yiqiniso, ungakhetha noma iyiphi inombolo, kodwa ucabangela yokuthi umgomo wakho bubanti elincane KCC, ngabe kungcono setha ukubaluleka 1. Ngakho, usebenzisa imiyalo emibili, ungenza emehlweni akho amancane kakhulu, ngaleyo ndlela lula umsebenzi wakhe futhi uthuthukise ukubonakala. Njengoba ubona, e-KCC Akukona njengoba kunzima njengoba kule CS GO ngoba inguqulo yakamuva ye umdlalo uzoba ukushintsha nemingcele ngaphezulu, ezifana static futhi ashukumisayo, khona kanye nokungabikho iphuzu phakathi nendawo nokunye.
Ithengwa kanjani i-futhi kanjani ukuthengisa imoto kule "Sampo"
UMzila 212 ezingeni "Planet amagugu": amathiphu
"League of Legends": mhlahlandlela. Jax we "League of Legends": Umhlahlandlela
Ukuhlolwa ikhadi "Maynkraft"
Ukusetha i-real "Boom!", Noma kanjani ukudlala ngoba umvukuzi
Sway - onjani hlelo kusukela "Microsoft"?
Umuthi 'Cinnarizine' izingane kanye nabantu abadala
Incazelo namazwana: "Hyundai Sonata" isizukulwane lesithupha
Quality ukuhlwanyelwa imishini: amageja, amahhala, sokuzivivinya - ezingeni lelisetulu umkhiqizo
Indlela ukuze alulame indoda? Amathiphu namacebo
Nezokungcebeleka isikhungo, Primorye, "Sidimi" (ukubuyekezwa)
Indlela ukukala usayizi iringi indlu
Kungcono kakhulu ukubeka itafula ngosuku lwakho lokuzalwa lwezingane
Ani Lorak: Biography oluthandayo yomphakathi
Amavithamini kwabesifazane asebenzayo. «Opti Abesifazane»: ukubuyekezwa, indlela isicelo nezinye izici izidakamizwa